Ku saabsan JDL - JDL Ilaalinta Deegaanka Caalamiga ah, Inc.
Biyuhu way is bedbeddelaan oo waxay isku beddeli karaan xaaladaha dibadda, isla mar ahaantaana, biyuhu waa daahir oo fudud yihiin. JDL waxay u ololeysaa dhaqanka biyaha, waxayna rajeyneysaa in lagu dabakho sifooyinka dabacsan ee nadiifka ah ee biyaha fikradda daaweynta biyaha wasakhda ah, ayna u cusbooneysiiso habka daaweynta biyaha qashinka habka dabacsan, habka keydinta iyo habka bey'ada, iyo inay siiso xalal cusub warshadaha daaweynta biyaha qashinka.
JDL Global Environmental Protection, Inc., oo ku taal magaalada New York, waa shirkad hoosaad ka ah Jiangxi JDL Environmental protection Co., Ltd. (lambar kaydka 688057) Waxay kuxirantahay teknooloojiyada FMBR (Facultative Membrane Bio-Reactor), shirkaddu waxay bixisaa adeegyada biyaha wasakhda ah. qaabaynta & la talinta daaweynta, maalgashiga mashruuca daaweynta biyaha qashinka, O&M, iwm.
Kooxaha farsamada aasaasiga ah ee JDL waxaa ka mid ah la taliyayaal khibrad u leh ilaalinta deegaanka, injineerada madaniga ah, injineerada korantada, injineerada maareynta mashruuca iyo injineerada R&D ee lagu daweeyo biyaha wasakh ah, kuwaas oo ku hawlanaa daweynta qashinka iyo R&D in ka badan 30 sano. Sannadkii 2008, JDL waxay soo saartay tikniyoolajiyadda Facialative Membrane Bioreactor (FMBR). Ficil ahaan sheyga astaamaha ah, tikniyoolajiyaddan waxay ogaaneysaa hoos u dhaca isku mar ee Carbon, Nitrogen, iyo Phosphorus hal xiriir oo falcelin leh oo leh dheecaanno yaryar oo dheecaano ah oo ka baxa hawl maalmeedka. Teknoolojiyaddu waxay si weyn u badbaadin kartaa maalgashiga iyo raadka ballaadhan ee mashruuca daaweynta bullaacaddu, waxay si weyn u yareyneysaa dheecaanka haraaga haraaga ah, waxayna si wax ku ool ah u xallineysaa "Ma ahan Daaradayda" iyo dhibaatooyinka maaraynta adag ee tiknoolajiyada daaweynta bullaacadaha.
Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada FMBR, JDL waxay xaqiiqsatay isbeddelka iyo kor u qaadista warshadda bullaacadaha ee ka socota xarumaha injineernimada illaa qalabka caadiga ah, waxayna ogaatay habka xakamaynta wasakhda baahsan ee "Aruurinta, Daaweynta iyo Dib u Isticmaalka Qashinka". JDL sidoo kale waxay si madax-bannaan u horumarisaa "Internet-ka Waxyaabaha + Cloud Platform" nidaamka kormeerka dhexe iyo "Mobile O&M Station". Isla mar ahaantaana, oo lagu daro fikradda dhismaha ee "xarumaha daaweynta bullaacadaha iyo baarkinka dhulka hoostiisa ah", tiknoolajiyada FMBR ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa warshadda daaweynta biyaha wasakheysan ee deegaanka taas oo isku dareysa isticmaalka biyaha wasakhda ah iyo xilliyada firaaqada, iyagoo siinaya xal cusub biyo deegaanka ilaalinta.
Ilaa Noofambar 2020, JDL waxay heshay 63 shatiyada abuurnimada. Tiknoolajiyada FMBR ee ay soo saartay shirkaddu waxay sidoo kale ku guuleysatay abaalmarinno dhowr ah oo caalami ah, oo ay ku jiraan IWA ee Mashruuca Innovation Award, Massachusetts Clean Energy Center's Wastewater Treatment Innovation Technology Pilot Grant, iyo American R & D100, oo lagu qiimeeyay "suurtagalnimada in lagu noqdo hoggaamiye horumar leh daaweynta bullaacadaha qarnigii 21aad "by URS.
Maanta, JDL waxay ku tiirsan tahay hal-abuurkeeda iyo hoggaanka tikniyoolajiyadda aasaasiga ah si ay si joogto ah ugu socoto. Farsamada JDL ee FMBR ayaa lagu dabaqay in kabadan 3,000 nooc oo qalab ah 19 wadan oo ay kujiraan Mareykanka, Talyaaniga, Masar iyo wixii lamid ah.
Mashruuca Abaalmarinta Innovation IWA
Sannadkii 2014, tikniyoolajiyada 'FMDR' ee JDL waxay ku guuleysatay IWA Bariga Aasiya Mashruuca Innovation ee cilmi baarista la dabaqay.
2018. Teknolojiyada FMD-da ee JDL waxay ku guuleysatay Abaalmarinta America R&D 100 ee Aqoonsiga Gaarka ah ee Mas'uuliyadda Bulsheed.
Mashruuca Pilot MassCEC
Bishii Maarso 2018, Massachusetts, oo ah xarun tamar nadiif ah oo caalami ah, waxay si guud u raadisay soo jeedinno loogu talagalay teknoolojiyada cusub ee daaweynta biyaha wasakhda ah adduunka oo dhan si loogu sameeyo duuliyeyaal farsamo Massachusetts. Sannad ka dib xulasho adag iyo qiimeyn, Maarso 2019, tiknoolajiyada FMD ee JDL waxaa loo xushay inay tahay teknolojiyadda mashruuca WWTP ee tijaabada ah ee Gegada Diyaaradaha ee Dawladda Hoose ee Plymouth.